Store — njem Lee
Ntụpọ Glass uwe elu
E biri ebi na a White, 100% polyester e ji esiji sub t-uwe elu
Tagless na omenala ihuenyo biri ebi size mkpado
Custom 116 kpara labeelu n'uwe ndị ala hem. Underside nke labeelu na-agụ,, “M ihere”.
ebili – Book
Society na-ekwu, oge ntorobịa bụ oge maka nweere onwe okwu, ma Njem Lee na-ekwu na Chineke na-akpọ onye ọ bụla ka o sikwa ná slumber, n'elu ala na-atụ anya, na-ebi ndụ n'ihi na bilitere King.
Ụwa na-agwa anyị na anyị mmalite afọ ndị a ga-irresponsibly ụtọ kama ewepụtara na nchụso ndị nwere nzube. A gwara anyị na ibu ọrụ na nkwa ndị ibu ga-atụpụ dị ka ogologo oge dị ka o kwere. Ya mere, ọtụtụ n'ime anyị na-eji ntorobịa anyị na a ọnọdụ dị mwute nke slumber-n'ụra on ndụ ruo mgbe anyị na-amanye bilie. Nsogbu bụ na ndụ amalitelarị. Ọ na-eme ugbu a. Na Chineke akpọwo anyị na-ebi ọ na-.
A dị ike na akwụkwọ, Njem Lee rụrụ ụka na ọ bụ oge na-eteta na-ebili, na-ebi ndụ n'ụzọ na e kere anyị ibi. Ma okenye ma nwata, anyị na a na-akpọ ibi Ya. Ugbu a. Young kwere ekwe enwe otu nsogbu dị ka Ndị Kraịst meworo agadi, ma ha na-eche ha pụrụ iche na ụzọ. Bilie na-agwa ndị isi nsogbu na-ekere òkè, ikop, na-agbanwe ndụ n'ụzọ.
Adịghị nnọọ nọdụ ala n'ebe: Bilie!
ebili – Album
Otu ọba nwere ike ịkụziri gị a otutu. N'ọtụtụ ụzọ, ọ bụ onye ọ kasị n'elu ikpo okwu na-agbasa a sitere n'ala ala obi ozi, ọsọ agba anọ bara oké uru ihe, na-eme ememe ndụ na a palatable, nke nwere ike n'ụdị. Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe Njem Lee na ya anọ zuru-ogologo album, “-Ebili.”
Iji ibuga ozi ya, Njem ahụ were a dị iche iche obibia Ndekọ a gburugburu. Kama akwado multiple emepụta, ọ na-arụ ọrụ nanị nọworo ogologo oge na-emeputa Gawvi maka dum album na ya Atlanta studio.
etu ọnụ uwe elu
E biri ebi na a Black, 100% mgbanaka-ua owu T-uwe elu.
E biri ebi na soft-aka ink, otú ebipụta bụ adụ aka aka.
Chiefs bụ tagless na a omenala na ihuenyo e biri ebi size mkpado.
Custom 116 kpara labeelu dụkọta na ala hem.
Underside nke labeelu na-agụ,, 'M ihere'.
Ndị a Chiefs nwere a slimmer ịkpụ. Ọ bụrụ na ị na-amasị slimmer kwesịrị ekwesị iberibe, mgbe ahụ na-atụ aro na ịtụ a size elu.
The Good Life – Book
nicer ụgbọ ala, ibu ụlọ, whatever your heart desires. Everybody wants to live The Good Life. But what happens when dreams become nightmares and the promise of freedom leads to a life of imprisonment? Gịnị na-eme mgbe ị na-achọpụta na ihe niile ahụ bụ gold adịkwaghị ewute? Maybe the rich and famous aren’t living The Good Life. Maybe our dreams are rooted in lies. ma eleghị anya,, dị nnọọ ma eleghị anya, ndị nwere obere nwere n'ezie ihe. Gịnị bụ The Good Life…n'ezie?
N'ime akwụkwọ a, akpọ mgbe ya acclaimed anọ album, The Good Life, Christian RAP ọgụ egwu na-ede akwụkwọ, njem Lee, kpughe ọgbụgba ihe ụwa, anụ ahụ na ekwensu kwalite dị ka ndị kacha na kacha eju afọ ndụ. O na-akọwa ihe na The Good Life n'ezie bụ: a ndụ eru anyị ma gabiga ihe ọ bụla ụwa a nwere na-enye. Kere: The Good Life. – Trailer #1 – Trailer #2
The Good Life – Album
The album ga-emepe na New Nrọ, featuring J.R. na Sho Baraka, nke bụ ihe na edemede ka eziokwu ahụ bụ na ịchụ onwe onye nanị ambitions ga na-anyị si dị ukwuu ná ndụ Chineke chọrọ maka anyị niile. Njem ndị a na onye nweere onwe anthems robot ?? na m Good featuring Lecrae, nke na-anya isi na nnwere, afọ ojuju na obi iru ala dị Christ. On Fantasy ??, featuring Suzy Rock, Njem ọma ekpughe nrọ ụwa anyị ma na-ebi ma ọ bụ ogologo maka na nro ọ ga-na-. Ndị ọzọ collaborations na KB, Andy Mineo, Jimmy Needham, V. Rose na ọtụtụ ndị ọzọ, usọrọ mma nke ndụ ihe ndị ezi emancipator, Onye Okike na-ekpughe ihe nile dị mma. Mgbe emeputa site unyi Rice, Alex Medina, G-Styles na Joseph Prielozny-enye a dị ebube backdrop maka afọ ojuju nke ndụ n'ime Kraịst.
The Man Up album, na njikọ na Man Up mkpọsa, -achọ ịza ajụjụ ahụ site na àjà ndị soundtrack na ije! Lecrae, njem Lee, Sho Baraka, Tedashii, Pro, KB na Andy Mineo na-akpọ ndị na Hip-iwuli elu ọdịbendị na ezi na Bible nwoke chịkọtara site: -eduga obi ike, jụrụ passivity, n'ịnakwere ibu ọrụ na-achụ ịdị umeala n'obi, site nchegharị na okwukwe na Kraịst.
N'etiti Ụwa Abụọ
Njem Lee chọtara onwe ya na-esikarị ike, ma n'ikpeazụ ekwe nkwa ala–kara aka maka ndụ ebighi ebi, ma tasked ịnyagharịa site na nke a otu. Ya nke atọ album, N'etiti Ụwa Abụọ awade ege ntị a collection of onye reflections na ikwughachi ọṅụ na-alụ anyị niile ahụmahụ dị ka ndị kwere ekwe. The oghere track aha, Real Life Music,?? achikota ihe na-atụ anya n'aka Njem si ọhụrụ oru ngo.
Ị na-ahụ Ya n'ụzọ doro anya? Back na a abụọ diski, Njem Lee bụ ozi n'ihi na ị na-ahụ Chineke doro anya na site na oghere nke Akwụkwọ Nsọ, enye gị a 20/20 ọhụụ. featuring ịrịba, iche iche na emeputa, tinyere ụfọdụ atụmatụ si Lecrae, Tedashii, Shai Linne, na ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ha maara
Njem Lee si mpụta mbụ Album! A-eto eto na unashamed so na 116 Ìgwè tọrọ ala ụfọdụ dị oké njọ okpomọkụ on “Ọ bụrụ na ha maara”. Ị na-achọghị ka atụ uche si na onye a. Njem Lee emetụ on a ton nke dị iche iche okwu na ị na-eche ihu gị ije na Christ, si otú anyị kwesịrị inyocha ndụ anyị ka ụfọdụ dị oké njọ ozizi na 2nd onye nke Atọ n'Ime Otu. Jide n'aka na ị cop a CD na igwu n'ime lyrics. Ị na nụrụ Njem Lee na 116 Ìgwè mkpokọta Album na now i nwere ike inwe ezigbo ihe ndị mbụ o zuru ogologo ntọhapụ na mmepụta site Tony Stone, JR, Lecrae, na ndị ọzọ, gbakwunyere ụfọdụ oké atụmatụ site nnochite, Lecrae, Tedashii, Ire ọkụ na ndị ọzọ!